Yakavharwa Apple Chitoro inogadzirira kusvika kweiyo iPhone 7 | IPhone nhau
Iye zvino tinogona kutaura kuti kuverenga pasi kwatanga. Avo veCupertino vane Apple Chitoro online yakavharwa, zvinoreva kuti ivo vari kuzoita shanduko dzine chekuita neye new hardware. Izvo zvinoita senge ndezvekuti ivo vachazopa iyo iPhone 7 uye iPhone 7 Plus, kunyange zviri zvakare zvingangodaro kuti vachazopa iyo Apple Watch 2, chizvarwa chechipiri cheApple smartwatch iyo ichazoburitswa makore maviri mushure mekutanga modhi.
Saka kuti pasave nekukanganiswa, Apple yakagadzirisa nzira yekuvhara Apple Store yayo online kwete kare kare. Kusvika panguva iyoyo, pavakanga vachigadzirira webhu kuisa iyo nyowani Hardware, peji racho harigone kufambiswa. Iye zvino zvinokwanisika kufamba uye posita inongowanikwa chete kana isu tichiedza kutenga chimwe chinhu. Unogona kutarisa kuti yakavharwa kubva HERE, chinongedzo chekutenga kweiyo iPhone SE.
Panovhurwa Apple Store zvakare tichaona nhau
Kune rimwe divi, zvinoitawo sezvakakosha kwandiri kujekesa zvazvinoreva kuvhara dandemutande: hazvisi zvekuti kubva nhasi tichakwanisa kutenga izvo zvavanowedzera; zvazvinoreva ndezvekuti ivo vari kuzowedzera ruzivo nezve zvinyorwa zvitsva uye ruzivo rwuchazonyanya kusanganisira patichakwanisa kutenga izvo zvishandiso. Munyika dzekutanga, idzo dzingangove United States, Canada, Australia, China nedzimwewo, zuva richabuda ravanogona kuchengetedza uye / kana kutenga zvavanoda kuwedzera, vachiri mune dzimwe nyika. ichaisa chimwe chinyorwa se "Inowanikwa munguva pfupi iri kutevera."
Panguva ino tinofanirwa kutaura zvishoma nezve izvo zvatingaone masikati ano:
iPhone 7 ine yakagadziridzwa 12Mpx kamera, OIS uye 2GB ye RAM.
iPhone 7 Plus ine mbiri kamera uye 3GB ye RAM.
Ose ari maviri maApple 7s aigona kunyudzwa, aigovana A10 uye M10 processor, aisazove nehedhiyo chiteshi uye aizove neyakagadzirwa yakafanana neiyo iPhone 6s.
Apple Watch 2 ine dhizaini yakafanana neyekutanga modhi, yakawanda bhatiri, GPS uye, pamwe, yakawanda yekuchengetedza memory.
Tichasiya chero kusahadzika kubva ku19: XNUMX pm (Peninsula Spain) masikati ano.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Store » Yakavharwa Apple Chitoro inogadzirira iPhone 7 kusvika